Nyaya Youpenyu: Kuswedera Pedyo naMwari Kwakandinakira | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Acholi Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Korean Krio Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mixe Mongolian Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
Kuswedera Pedyo naMwari Kwakandinakira
PANDAKANGA ndava nemakore 9, ndakaguma kureba. Izvi zvakaitika makore 34 apfuura pandaigara kuCôte d’Ivoire, uye nanhasi ndakangoreba 1 mita. Pazvakava pachena kuti ndizvo zvandiri, vabereki vangu vakandikurudzira kuti ndishande nesimba kuitira kuti ndisarambe ndichifunga nezvechitarisiko changu. Ndakaisa musika wemichero pamba pedu uye ndaiita kuti ugare uchiratidzika zvakanaka. Izvi zvaiita kuti vanhu vakawanda vauye kuzotenga.
Asi pane zvimwe zvinhu zvisina kuchinja kunyange zvazvo ndaishanda nesimba. Ndakanga ndichiri mupfupi, uye ndainetseka nezvinhu zvidiki-diki muupenyu zvakadai sekutadza kusvikira pamakaunda muzvitoro. Zvinhu zvese zvaiita sezvakagadzirirwa vanhu vakareba kundipeta kaviri. Ndainzwa sendisingabatsiri, asi izvi zvakachinja ndava nemakore 14.
Rimwe zuva, vakadzi vaviri vari Zvapupu zvaJehovha vakatenga michero uye vakabva vatanga kudzidza neni Bhaibheri. Pasina nguva ndakaona kuti kuziva Jehovha nechinangwa chake kunokosha kupfuura chitarisiko changu. Izvi zvakandibatsira. Pisarema 73:28 ndiyo yakava rugwaro rwandinoda kupfuura ose. Chikamu chekutanga chendima iyi yeBhaibheri chinoti: “Kuswedera pedyo naMwari kwakandinakira.”
Mhuri yedu yakangoerekana yatamira kuBurkina Faso, uye upenyu hwangu hwakabva hwachinja zvikuru. Pataiva muCôte d’Ivoire, vanhu vakanga vandijaira ndiri pamusika wangu. Asi kwatakanga tava kugara, vanhu vakanga vasina kundijaira, vakawanda vaitoshamiswa nekundiona. Vanhu vaingoramba vakanditarisa. Izvi zvaiita kuti ndigare mumba dzimwe nguva kwemavhiki. Ndakabva ndayeuka kuti zvakanga zvakandinakira sei kuswedera pedyo naJehovha. Ndakanyorera hofisi yebazi yeZvapupu zvaJehovha ndokubva ndashanyirwa nemunhu akakodzera, mumishinari anonzi Nani uyo aifamba nekamudhudhudhu.
Migwagwa yekwandaigara yaiva nejecha saka yaitsvedza, uye pakwainaya yaizara madhaka. Nani aidonha kakawanda pakamudhudhudhu kake paaiuya kuzodzidza neni, asi hazvina kumuodza mwoyo. Akazondikumbira kuti tiende tese kumisangano. Ndaiziva kuti izvi zvaizoita kuti ndibude mumba, ndichinosangana nevanhu vaingoramba vakanditarisa. Uyewo, paainditakura nekamudhudhudhu kaibva kawedzera kurema, iko kakanga kagara kachinetsa kufambisa mujecha. Kunyange zvakadaro, ndakabvuma. Ndakayeuka chikamu chechipiri cherugwaro rwandinoda kupfuura ose, chinoti: “Ndakaita Changamire Ishe Jehovha nzvimbo yangu yokupotera.”
Dzimwe nguva ini naNani taiwira mumadhaka, asi takanga tichitamburira zviripo, nekuti taisvika kumisangano. Kusiyana nevamwe vanhu vaingoramba vakanditarisa, vanhu vaiva muImba yoUmambo vaindinyemwerera! Ndakazobhabhatidzwa pashure pemwedzi 9.
Chikamu chechitatu cherugwaro rwandinoda chinoti: “Kuti ndizivise mabasa enyu ose.” Ndaiziva kuti ushumiri hwaizondiomera kupfuura zvimwe zvose. Ndichiri kuyeuka pandakatanga kuenda kunoparidza paimba neimba. Vana vadiki, kunyange nevanhu vakuru chaivo vaingoramba vakanditarisa, vainditevera uye vaitevedzera mafambiro angu. Izvi zvaindirwadza chaizvo, asi pandaifunga kuti ivo vanotodawo Paradhiso semadiro andinoiita, zvaiita kuti ndisaneta.
Kuti zvindiitire nyore, ndakatenga bhasikoro rine mavhiri matatu rinochovhwa nemaoko. Munhu wandaishanda naye muushumiri aindisunda ndiri pabhasikoro racho kana paine mukwidza, kana rava kukunguruka pamateru okwirawo. Kunyange zvazvo pakutanga ushumiri hwakanga hwakandiomera, hwakazoita kuti ndiwane mufaro zvekuti muna 1998 ndakatanga kushanda sapiyona wenguva dzose.
Ndakadzidzisa vanhu vakawanda Bhaibheri, uye 4 vacho vakabhabhatidzwa. Munin’ina wangu akagamuchirawo chokwadi! Kunzwa nezvekufambira mberi kwevamwe kwakandikurudzira panguva chaiyo yandaida kukurudzirwa. Mumwe musi ndichirwara nemarariya, ndakatambira tsamba kubva kuCôte d’Ivoire. Ndakanga ndatanga kudzidza Bhaibheri nemumwe mudzidzi wepaimwe yunivhesiti muBurkina Faso ndikabva ndaita kuti adzidze neimwe hama. Mudzidzi wacho akazotamira kuCôte d’Ivoire. Ndakafara chaizvo pandakanzwa kuti akanga ava muparidzi asina kubhabhatidzwa.
Ndinowana sei zvekurarama nazvo? Rimwe sangano rinobatsira vakaremara rakati raida kundidzidzisa kusona. Mumwe mudzidzisi akaona mashandiro andaiita achibva ati: “Tinofanira kukudzidzisa kugadzira sipo.” Saka vakandidzidzisa. Ndinogadzira sipo yekuwachisa neimwewo inoshandiswa mudzimba. Ndinoigadzirira pamba. Vanhu vanofarira sipo yangu uye vanoudzawo vamwe nezvayo. Ndinoiendesera vanhu ndichishandisa kamudhudhudhu kane mavhiri matatu.
Zvinosuruvarisa kuti muna 2004, marwadzo aikonzerwa nemusana wangu wakaremara akanga anyanyisa zvekuti ndaitofanira kurega kupayona. Kunyange zvakadaro, ndichiri kuita basa reushumiri zvizere.
Vanhu vanoti ndinonyanya kuzivikanwa nekunyemwerera kwangu kunoita kuti vamwe vanyemwererewo. Hapana chinganditadzisa kufara nekuti kuswedera pedyo naMwari kwakandinakira.—Yakataurwa naSarah Maiga.